Yedu Sony Xperia XZ1 vs Xperia XZ Premium vs Xperia XZ enzaniso inoratidza kuti yazvino Sony flagship foni inokwenenzvera kusvika kune yakanakisa inogadzira mafoni kusvika ikozvino, saka iwe unoziva ndeipi inorongedza yepamusoro kamera tech, mashandiro uye midhiya chops.
Sony's Xperia XZ mureza uri kukurumidza kusvika zuva rayo rekutanga rekuzvarwa uye unoramba uri ruoko rwakakura, kunyangwe parizvino rwasundidzirwa mumumvuri neimwe nzira nekuuya kwemaew handsets maviri eprimiyamu. Kutanga isu taive neiyo Xperia XZ Premium, yekutanga nhare kushandira kumusoro ine simba 4K HDR-yakagadzirira kuratidza. Uye ikozvino Sony yatangisa nyowani nyowani Xperia XZ1, Kuzvirova nyowani kamera maficha uye kugadzirisa iyo XZ's specs kuti zviuye nayo parizvino.
Saka mafoni aya eSony anofananidzwa sei uye varidzi veXperia XZ vanofanirwa kufunga nezve kusimudzira kune mutsva nyowani? Heano edu akazara Xperia XZ1 vs Xperia XZ vs Xperia XZ Premium kuenzanisa ongororo, kukuratidza iyo ruoko rwakakunakira iwe.
Verenga zvinotevera: Iyo Xperia XZ1 inofananidzwa sei neXZ1 Compact?
Sony Xperia XZ1 vs Xperia XZ Premium vs Xperia XZ: Mhando
Svondo reku screen 5.2-inches 5.2-inches 5.5-inches
Mvura inopesana here? Ehe Ehe Ehe
Fingerprint sensor? Ehe Ehe Ehe
ndangariro 3GB 4GB 4GB
chengetedzo 32GB 64GB 64GB
MicroSD? Ehe Ehe Ehe
Pamberi kamera 23-megapixel 19-megapixel 19-megapixel
Sony Xperia XZ1 vs Xperia XZ Premium vs Xperia XZ: Dhizaini
Tambanudza nhare nhatu idzi padivi-ne-padivi uye iwe unobva wakurumidza kuona kuti iwo ese mutambo uyo wakasarudzika Sony anotaridzika uye anzwe, kunyange iwo ari iwo akatosiyana zvakanyanya kana zvasvika kune kududzirwa uye sizing.
Iyo yekutanga Xperia XZ uye mutsva XZ1 mutambo unenge wakafanana kupera. Aya ma handsets maviri anoshanda kumusoro 5.2-inch kuratidza, izere nechunky bezels kumusoro uye pazasi pekuratidzira. Kushandisa-ruoko-kumwe kunogadzikana zvine mutsindo nekutenda kwaSony's Loop dhizaini, iyo inopa kumusoro kunokomberedza mitsetse inokodzera muchindwe.
Iyo alkaleido simbi yekupedzisa pane iyo XZ zvinosuruvarisa kuti ingangoita kukwenya, izvo kusvika parizvino zvinoita kunge zvichapetwa neiyo nyowani XZ1's unibody simbi furemu. Ehezve, kuyedzwa kwakakura chete ndiko kucharatidza kana ichi chitsva mureza chiri kunyanya kusimba.
Kana iwe uri mushure mekukura kukuru, iyo Xperia XZ Premium ndiyo yako. Iyi beefy ruoko inowedzera saizi size kusvika 5.5-inches uye semhedzisiro iri yakati wandei yakati wandei, kunyangwe iwo mamwe iwo akanyatsogadzikana akakombama mitsara inobatsira nekubata. Kwakaenda iyo matte simbi inowonekera zvakare, yakatsiviwa ne glossy inoratidzira pamusoro. Izvi zvakaoma kunge bhutsu dzekare, kudzosera makwati uye scuffs zviri nyore, kunyangwe parutivi rweflip iri zvakare yakazara magineti eminwe. Iyi nyaya inonyanya kucherechedzwa pane iyo Chrome modhi, saka ungangoda kutarisa iyo isinganzwisisike Deepsea Nhema modhi pachinzvimbo.
Tese nhare nhatu pano dzinodzivirira mvura, saka dzinogona kurarama dunking mumamita emvura kweinenge hafu yeawa. Iwe zvakare unowana inoteerera yeminwe yeminwe inzwa yakasungirirwa pamucheto mune yega kesi, nekukurumidza uye kwakachengeteka kuvhura yako Sony foni.
Sony Xperia XZ1 vs Xperia XZ Premium vs Xperia XZ: Screen uye midhiya
Sezvo Sony yakadyarwa zvakanaka mu tech yekuratidzira, hazvishamise kuti yavo inomira mafoni vanopa zvinonakidza kuratidzwa.
Iyo Xperia XZ ndiyo yakasarudzika midhiya muchina pano, iine 'bog-standard' 5.2-inch Yakazara HD IPS pani. Kunyangwe mamwe akawanda mireza achishandira kumusoro Quad HD skrini, iyi 1920 × 180 pixel resolution inoita basa rakanaka kana uchiona mabhaisikopo uye ichichengeta mafoto uye zvese zvimwe zvinotaridzika zvakanaka uye zvakapfava. Iwe unogona kusimudzira iyo vibrancy yemavara neiyo Sony's Super Vivid modhi uye pane mufananidzo wekusimudzira wekutamba kwevhidhiyo futi.
Sony nyowani Xperia XZ1 inhanho kumusoro, ichichengeta iyo yakazara HD resolution apo ichiwedzera HDR vhidhiyo rutsigiro. Izvi zvinokupa yakafararira, yakasarudzika yemavara gamut pamwe neakajeka musiyano mazinga, ezvinyorwa zvinotsigirwa. Amazon Prime Vhidhiyo neNetflix zvese zvinopa vhidhiyo yeHDR kutenderera pakuburitswa.
Zvakare nekuzvirumbidza skrini hombe kupfuura mamwe maSony mafoni, iyo XZ Premium inopa iyo yekupedzisira nhare yekutarisa ruzivo ine yakazara 4K HDR kutamba. Izvi zvinoreva kuti chakasvibirira chemufananidzo kubereka pamwe nekuvandudzwa kwematanho ekusiyana uye kubereka kwemavara.
Ese matatu mafoni eXperia mune ino fananidzo zvakare anoteerera zvakanyanya kune odhiyo mhando, uye ndizvo chaizvo. Iwe unowana yakavakirwa-mukati Hi-Res odhiyo rutsigiro, inova inhau huru kune echokwadi audiophile, nepo iyo DSEE-HX injini inogona kusimudzira mhando yemakomputa akaomeswa kuti iite iwo anzwike zviri nani zvirinani.
Iwe zvakare unowana microSD memory kadhi kuwedzera mune ese matatu kesi, yekutakura kutenderera kwakakura midhiya kuunganidzwa.
Sony Xperia XZ1 vs Xperia XZ Premium vs Xperia XZ: Performance uye hupenyu hwebhatiri
Kana zvasvika pakushanda, iyo Xperia XZ zvakare inowira pasi pemurwi, sezvaungatarisira. Mushure mezvose, izere izere gore ikozvino, zvinoreva kuti zvekare maekisheni.
Nekutenda foni ichiri kupa yakajeka zuva nezuva chiitiko nekuda kwayo ine simba kwazvo Snapdragon 820 processor, inotsigirwa ne3GB ye RAM. Unogona kumhanya mitambo yazvino uye unakirwe neaya anoshamisa anoonekwa pasina chero rudzi rwekunonoka kuti uparadze ruzivo. Uye ikozvino iyo XZ yakagadziridzwa ku Android Nougat, unogona kana kushanda pamaviri maapps padivi-ne-parutivi panguva imwe chete. Tarisa uone yedu kwenguva refu Xperia XZ ongororo nokuda kwezvose zvaunoda kuziva.
Nekudaro, iyo Xperia XZ1 uye Xperia XZ Premium zvese zvinopa Qualcomm yazvino Snapdragon 835 processor. Izvi zvinopa kwete chete bundu maererano nekumhanya kumeso, asi zvakare simba rekuita uye yepamusoro kurodha kumhanya (ikozvino kusvika kune yedzidziso 1Gbps). Iyo yekupedzisira ichanyanya kubatsira varidzi vePrimiyamu, vangangoda kufashukira kana kurodha bhaisikopo re 4K-resolution parwendo.
Verenga zvinotevera: Snapdragon 835 vs Snapdragon 820, ndeupi musiyano?
Kana zviri zvehupenyu hwebhatiri, isu tichiri kuyedza zvizere iyo Xperia XZ1 kunyangwe isu tiri kutarisira zuva rakazara rekushandisa pamutero kubva pasero re2700mAh. Ndozvatinowana kubva kune mamwe mafoni eSony pano.
Sony Xperia XZ1 vs Xperia XZ Premium vs Xperia XZ: Makamera
Kana zvasvika pameso, iyo Xperia XZ1 uye XZ Premium zvakare inoratidza kusimudzira kukuru pamusoro pegore rapfuura Xperia XZ.
Usatitorere zvisiri izvo, isu tichiri vateveri vakuru veXperia XZ's 23-megapixel tri-sensor kamera, iyo inogona kutora yakazara-yakazara snaps chero nguva yezuva. Sony's pachinzvimbo inopenya Superior Auto modhi inongowedzera kuve nani uye iri nani, ichipa isina kushushikana nzira yekupfura yakanakisa snaps isina ruzivo rwekutora mifananidzo chero. Uye kana iwe uchizvifarira pachako semupfuri unopinza, unogona kushandisa zvinyorwa zvemanyore kutora mhando chaiyo yepfuti.
Iyo Xperia XZ inogona kurekodha Yakazara HD kana 4K resolution vhidhiyo, ine yakadzikama mufananidzo kudzikama uye yakasimba mhedzisiro pane akasiyana mamiriro. Tarisa uone zvizere Sony Xperia XZ kamera kuongorora nokuda kwezvose zvaunoda kuziva.
Sony's Xperia XZ Premium yakaunza iyo nyowani yeMotion Eye kamera, iyo inodonhedza iyo megapixel kuverenga kusvika 19, asi ichipa zvimwe zvakagadziridzwa zvekupfura. Kufambisa zvidzidzo zvakatorwa zvakachena nekuda kweiyo 0.2-yechipiri latency uye kugona kwePrimiyamu kutora otomatiki mafoto kana ichinge yaona chero mhando yekufamba. Iwe zvakare unowana yakakura senji pane iyo inowanikwa pane yakajairwa XZ, iyo inoshandura kune zvirinani yakaderera mwenje foto kubatwa, nepo iyo mufananidzo kudzikamiswa kuri nyore wepasi rose-kirasi, kunyangwe kana uchipfura 4K vhidhiyo.
Ehezve, inokatyamadza nyowani nyowani kamera ficha inowanikwa pane iyo Premium modhi iSony's Super Slow Motion chishandiso. Paunenge uchipfura Yakazara HD vhidhiyo, iwe unogona kubaya pane-skrini bhatani kutora rakakurumidza-nekukurumidza kuputika kwemakumi mapfumbamwe emakumi mapfumbamwe emafuremu-per-yechipiri vhidhiyo. Mhedzisiro yacho inoshamisa zvinoshamisa.
Tarisa uone yedu yakadzika Xperia XZ Premium kamera ongororo yemasampuli uye nezvimwe paMotion Eye shooter.
Iyo nyowani XZ1 inopa ingangoita yakafanana kamera chiitiko kune iyo XZ Premium, iine akati wandei maficha uye ma modhi akakandwa mukati.
Iwe zvakare une 19-megapixel snapper iyo inogona kupfura kusvika ku4K resolution vhidhiyo, ine Superior Auto modhi uye Steady Shot mufananidzo kudzikama. Nekudaro, iwe ikozvino unowanawo unoshanda kunyemwerera kutora mode iyo inobata chidzidzo chako pavanorova 'peak kusekerera', pamwe neanonakidza 3D kutora app kuti aongorore mune chaiyo inomiririra chero kumeso kana chinhu. Ose maviri maficha aya anouya kuXZ Premium kana yagadziriswa kuOreo.
Chimwe chinhu chinosarudzika kune iyo XZ1 ndiyo-nyowani nyowani autofocus kuputika modhi. Izvi zvinokutendera iwe kutora mapikicha anosvika zana mumasekondi gumi, iine autofocus ichiteedzera nyaya yako mukati.
Tarisa uone yedu yakadzika Xperia XZ1 kuongorora kamera kune zvese zvaunoda kuti uzive nezve uyu shooter.